विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको गुलाबी हिरा कति मूल्यमा बिक्री हुँदैछ ? - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Exclusive विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको गुलाबी हिरा कति मूल्यमा बिक्री हुँदैछ ?
मस्को । विश्वको सबैभन्दा ठूलो उज्ज्वल बैजनी (गुलाबी) हिरा बेच्न आगामी ११ नोभेम्बरमा लिलाम प्रक्रियामार्फत बेचिने भएको छ । रुसको सोतेबीको जेनेभा मग्निफिसन्ट ज्वेल्स र नोबल ज्वेल्सले यसबारे सञ्चार माध्यमलाई स्थानीय समयअनुसार सोमबार जानकारी गराएका हुन् ।
‘गुलाबको आत्मा (द स्प्रिट अफ द रोज)’ नाम दिइएको उक्त १४.८३ क्यारेटको हिराको मूल्य २ करोड ३० लाखदेखि ३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान गरिएको अमेरिकी पाक्षिक पत्रिका फोब्र्सले जनाएको छ । लिलामीका लागि राखिएको उक्त रत्न विश्वभर पाइने अन्य बहुमूल्य धातुको दुई प्रतिशत मात्रै रहेको अनुमान गरिएको छ ।
‘यो बिक्री एलोरोसा र सोथेबीबीच लामो समयसम्मको सम्बन्धको परिणाम हो, यस उत्कृष्ट धातुका बारेमा धेरै महिनासम्म छलफल भएको थियो र छलफलले यसलाई बिक्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने उत्तम तरिका भएको निष्कर्ष निकालेको थियो,’ विशेषज्ञ र सोथेबीको ज्वेलरी विभागका निर्देशक तथा ज्वेल्स बिक्री प्रमुख बेनोइट रिपेलिनलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गोलाकार आकारको उक्त मणि २७.८५ क्यारेटको स्पष्ट गुलाबी डायमण्डले बनेको छ । रुसको उत्तरी–पूर्वी शाखा गणतन्त्रमा रुसी खनिज कम्पनी अलरोसाको स्वामित्वमा रहेको खानीमा भेटिएको थियो । हिरालाई सेर्गेई डायागिलेभले निर्माण गरेपछि ‘द स्पिरिट अफ द रोज’ नाम दिइएको थियो भने सन् १९११ को अप्रिल १९ मा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो ।
राजधानी समाचारदाता - May 10, 2020
ट्याकटरबाट खस्दा एक युवकको ज्यान गयो
राकेश गुप्ता - March 16, 2020
सर्लाही। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा ट्याकटरबाट खस्दा एक युवकको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा ट्याक्टरमा मजदुरीको काम गर्ने बागमती ७ तुफानपुरका ३२ वर्षिय रामपुजन...
Not-to-be-missed भगीरथ भण्डारी - March 19, 2020
इलाम। इलामको सूर्योदय नगरपालिका–१३ को पोखरी स्थित किराँत टोलमा हत्यागरी अम्लिसो बारीमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेकी स्थानीय १७ वर्षकी किशोरी आकृति राईकोे हत्यारा फेला...
प्रदेश ७ सीपी लोहिया - July 28, 2020
खेल एजेन्सी - March 19, 2020
टोकियो । युरोपियन फुटबलको सर्वाेच्च निकाय (यूईएफए)ले मंगलबार आगमी जुन जुलाईलाई तय भएको युरोकप फुटबल प्रतियोगिता एक वर्षपछि गर्ने निर्णय ग-यो । सोही दिन...
Editor-Picks कौशिला कुँवर - September 30, 2020
काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न थालेका छन् । व्यापारीले खाद्य वस्तुदेखि हरियो तरकारीमा मनपरी मूल्य...
प्रमुख प्रशान्त वली - March 9, 2020
Breaking News निराजन पौडेल - February 7, 2020
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध...